Factory laboratoara laboratoara | Mpanamboatra sy mpamatsy biby laboratoara any Sina
Fanaraha-maso ny aretina
Fanasan-tarehy sy famonoana otrikaretina
Sterilizers etona kely (Autoclaves)
Sterilizers entona antonony (Autoclaves)
Sterilisera maripana ambany
Fonosana sy faritra fanaovana sterilization
Faritra fitehirizana steril
Disinfector amin'ny rivotra iainana
Pendant Ceiling medaly
Fitaovana taratra sy diagnostika
Vahaolana malefaka endrika-fenoy-famehezana (FFS) vahaolana
Tavoahangy plastika Vahaolana ISBM
Vahaolana Blow-Fill-Seal (BFS)
Vahaolana SVP vovoka maina maina
Rafitra mandeha ho azy
Famonoana otrikaretina sy fanamafisana
Masinina fanafody biolojika
Fitsaboana rano fisotro biby
Kabinetra momba ny fiarovana ara-biolojika
Herinaratra fitsaboana herinaratra avo ...
Fanasongadinana misongadina: ■ Taratra X-telo (6MV, 10MV ary 15MV) sy electron multi ...
Fanasan-damba fitifirana varavarana mandeha ho azy
Endri-javatra momba ny vokatra ■ Famolavolana sy fizotra efitrano faran'izay tsara The efitrano conical ao S ...
Endoscop malefaka mandeha ho azy ...
Fahombiazana avo fanasan-damba Rider andian-damba fanasan-tarehy endoscope fanasan-damba afaka hamita th ...
Endri-javatra ■ Jiro am-bava Ny mari-pana amin'ny loko dia azo ahitsy ary misy illumi roa ...
Topimaso topy famaritana vial: 1ml-100ml Hafa famoahana: tavoahangy 10-500 / minitra F ...
Tabletop sterilizer INDRINDRA-T (...
Fitaovana ■ Fanadiovana mora vidy rano fisaka misy fonony azo esorina ...
Endri-javatra ■ Ny famolavolana maodely dia manamora kokoa ny fikojakojana. ■ Haingam-pandeha 3-grade opt ...
Fitsipiky ny asa: UV sivana + sivana. Ny fahazavana UV dia hanimba ny proteinina mikraoba ...
NY Series Ampoule Water St ...
Topimaso Ho toy ny ivon-toerana R&D nasionaly famonoana otrikaretina sy steriliza ...
Fampidirana ny vokatra BDS-H andiam-pandevonan-tsiranoka hidrozenina peroxyde diffusional ...
Endri-javatra Manomeza vahaolana isan-karazany ho an'ny biby lehibe, ary afaka ...
Mpitoka kitapo malefaka
Fampidirana vokatra BSE-IS andian-tsarimihetsika totozy sy raty voatokana ho azy ...
Mpisaraka akoho amam-borona
Fampidirana ny vokatra Ny mpampisaraka akoho amam-borona BSE-l pressu tsara sy ratsy ...
BWS-M-G360 mandeha ho azy ...
Ny rano tsy misy fika entin'ny laboratoara systilisitra fanamafisam-peo amin'ny rano ...
SHINVA dia afaka manome vokatra mitaiza isan-karazany, anisan'izany ny IVC, habe amin'ny tranom-borona isan-karazany sy ny talantalana sns. SHINVA dia afaka manome serivisy namboarina mifanaraka amin'ny zava-misy marina hihaonana amin'ny filan'ny mpampiasa isan-karazany.
BWS-M-G360 milina famenoana rano fisotro mandeha ho azy
Ny rano tsy misy fika izay tsaboin'ny rafitra fanamainana rano fisotro biby any amin'ny laboratoara dia mifandray tsy tapaka amin'ny masinina famenoana tavoahangy rano amin'ny alàlan'ny fantsom-pidiovana mba hisorohana ny aretina faharoa amin'ny kalitaon'ny rano;
Ny mpampisaraka akoho amam-borona BSE-l dia mitoka-monina ary miteraka faneriterena akoho amam-borona no fitaovana farany novolavolain'ny orinasanay ho an'ny fiompiana akoho amam-borona, fiompiana SPF ary fanandramana fivarotam-panafody virus.
BSE-IS andiana totozy sy rat rat isolator dia fitaovana manokana amin'ny fitomboana SPF na totozy sy rat tsy misy fetra amin'ny tontolo ara-dalàna na tontolo iainana sakana. Izy io dia ampiasaina amin'ny fampiroboroboana sy ny teknikan'ny totozy sy voalavo.
Manomeza vahaolana isan-karazany ho an'ny biby goavambe, ary afaka manome fandaharam-piterahana mandeha ho azy arakaraka ny toe-javatra misy ny mpampiasa;
BDS-H andiana disinfector hydrogène peroxydeus diffusional dia mampiasa entona hydrôniôro peroxyde ho toy ny mpamono otrikaretina sy fanamorana. Mety amin'ny entona mamono otrikaretina amin'ny toerana voafetra, ny fantson-drano ary ny fitaovana.
Ny mpampitoka fandidiana voalavo sy totozy dia mety amin'ny foiben'ny biby any amin'ny laboratoara, andrim-panjakana quarantine, orinasan-jaza biofarmasy, tobim-pitsaboana sy tobim-pahasalamana sns.
BSP-C andian-dahatsoratra fanary fitaovana fandriana fandriana
Ampiasao ny rojo mekanika mihidy na fitsipiky ny banga mba hitaterana ny fandriana vaovao avy ao amin'ny efitrano fitehirizana mankany amin'ny faritra fanampiny, na hitaterana ny fandriana fako avy amin'ny faritra fanangonana mankany amin'ny faritra fitsaboana afovoany.
BIST-WD andian-drano fisotroana biby an-tserasera
Amin'ny fampiasana teknolojia fanamorana hafanana avo lenta, rano fisotro biby mandritra ny fizotran'ny toetr'andro avo lenta ary mitazona fotoana fanamorana, mamono ireo zavamiaina bitika rehetra ao anaty rano, hahatratrarana ny famafana ny rano fisotro biby;
Trano alika sy kisoa
Omeo vahaolana isan-karazany ny vokatra ho an'ny biby lehibe, ary afaka manome programa miteraka otrikaretina mandeha araka ny zava-misy iainan'ireo mpampiasa
Automatique avo lenta hampihenana ny vidin'ny fihazakazahana.
Fanampin-tsakafo, mandeha ho azy ny famatsian-drano fisotro ary ny fanariana fecal sy ny urine. Kely ny asa sy ny fandidiana mora kokoa miaraka amina fiompiana mitovy.
BWS-M andianà mpanasa tavoahangy fisotro rano mandeha ho azy
Fitaovana fanasana manokana ho an'ny tavoahangy fisotro rano, tavoahangin-drano 72 diovina amin'ny andiany iray; fomba fanasana haingana;
Shinva: mifantoka amin'ny fampandrosoana avo lenta